जान्नुहोस् , कु’न भागमा टा’उको दुख्नु के रोगको संकेत ?’ – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
जान्नुहोस् , कु’न भागमा टा’उको दुख्नु के रोगको संकेत ?’
टाउको दुख्ने समस्या कहिल्यै नभोगेका नेपाली कम नै होलान् । तपाईलाई पनि कुनै न कुनै समयमा टाउको दुख्ने समस्याले सताएको हुनसक्छ । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको नसर्ने रोग सम्बन्धि जोखिम तत्वको सर्वेक्षणले पनि १५ दशमलब २ प्रतिशत व्यक्तिमा टाउको दुखाइको समस्याका कारण काम नै गर्न नसक्ने अवस्थाामा पुगेको देखाएको छ । परिषद्ले सन् २०१९ को फेब्रुअरी देखि मे सम्ममा ५ हजार ५ सय ९३ जनामा सर्वेक्षण गरेको थियो ।
सो सर्वेक्षणका अनुसार १५ दशमलब २ प्रतिशत व्यक्तिहरु गम्भिर रुपमा टाउको दुख्ने समस्याका कारण घ’रायसी तथा अन्य कार्य नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको जनाएको छ । चिकित्सकका अनुसार टाउँको दुख्नुको कारण पनि विभिन्न किसिका हुन्छन् ।
टाउको दु**खाइको कारण पत्ता लगाउन कुन भागमा दुखेको छ भनेर थाहा हुनुपर्छ । टाउकोको फरक–फरक भागमा हुने दुखाईले फरक–फरक रोगको संकेत जनाउँछ । आज हामी तपाईलाई टाउकोको कुन भागमा हुने दुखाइले कस्तो रोगको संकेत गर्छ भनेर जानकारी दिदैछौं ।
कुन भागमा टाउको दुख्नु के रोगको संकेत ?
–यदी तपाईलाई आफ्नो टाउँको भारी महसुस हुन्छ र थिचिए जसरी छट्कीएर दखिरहन्छ भने तपाईलाई धेरै तनाव भएको हुनसक्छ । मानिसलाई धेरै तनाव भएर पुरै टाउको भारी भएर दुख्ने गर्छ ।
–के तपाईलाई हेरक महिना चार पटक सम्म नियमित रुमा टाउको दुख्छ रु टाउको दु’खाइ शुरु हुनभन्दा अगाडी आफुलाई टाउको दुख्ला जस्तो अनुभव हुन्छ रु वा टाउको दुख्नु भन्दा अगाडी नै आफुलाई टाउको दुख्न लागेको थाहा हुने गर्छ भने तपाईमा माइग्रेनको समस्या भएको हुनसक्छ । पटक–पटक टाउको दुख्नु र टाउको दुख्नु अडाडी टाउकोको आधा भाग मात्र दुख्छ भने त्यो माइग्रेनको समस्याले टाउको दुखेको हुनसक्छ ।
– यदी तपाईको टाउकोको अगाडीपट्टिको भाग टन्किएर दुख्छ र टाउको उठाउन गाह्रो हुन्छ भने तपाईलाई पिनास भएको हुनसक्छ । पिनास भएको समयमा पनि मानिसमा टाउको दुख्ने गर्छ ।
–यदी टाउकोको अगाडीपट्टि दुख्ने, आँखा गल्ने, टाउको गल्ने समस्या छ भने तपाईको आँखाको पावर नमिलेको हुनसक्छ
–यदी तपाईको टाउकोको पछाडी भाग मात्र दुख्छ भने तपाईको रक्तचाप अनियन्त्रित भएको हुनसक्छ । र**क्तचाप धेरै वा कम हुन टाउकोको पछाडीको भाग दुख्ने गर्छ । टाउको दुखाईको कारण पत्ता लगाएर सोही अनुसारको उपचार गर्दा टाउको दुखाइ कम गर्न सकिन्छ ।
Previous सी’के राउतको देशवि’रुद्ध फेरि वि’ष व*मन, ‘नेपाल’ नाम प्रती नै आ*पत्ति!
Next ७० करोड काण्ड भ्रष्टाचारमा प्रमाणित भए बाँ’स्कोटालाई ८ बर्ष जेल :-कानुन